Mz ကြီးကို — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited February 2009 in Idea
ကျွန်တော် ဒီ Thread ကိုဖွင့်ရခြင်းကတော့ အမ်ဇက် မမ်ဘာများ အမ်ဇက် ကိုဘယ်လိုစတွေ့လဲ ဆိုတာလေးတွေသိချင်လို့ပါ
ကျွန်တော်အမ်ဇက်ကို စတွေ့တာ ကိုဇော်သူရိန် ခေါ် အိုင်တီမန်း ကြောင့်ပါ သူဘလော့ ကိုရူးရူးသွတ်သွတ် ဖတ်ရင်းနဲ့တွေ့တာပါ
နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့လည်း သိပ်မဝင်ဖြစ်ဘူး ဖိုရမ် ရဲ့ meaning ကိုမသိသေးဘူးဗျ
နောက်ပိုင်း mz dictionary ကိုကူပါ့မယ်လို့ပြောပြီး ကတည်းက ဒီဖိုရမ် မှဒီဖိုရမ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဗျား
ကျွန်တော်က သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မြန်မာပြည်က site တချို့
နဲ့အတိုက်ခံရတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲမှာ mz လည်းပါတယ်လို့ပြောထားတာ။ အဲဒီကနေ Link ရပြီး
mz ထဲရောက်နေပါကြောင်း ကို gipsy ရေ။
ကျနော်ကတော့ Linux အတွက် zawgyi keyboard ကို google မှာရှာရင်း ကိုစေတန့် blog သွားတွေ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ MZ ကိုပါတွေ့ရင်း member လုပ်ပြီး၀င်လာတာပါ။ အရင်တုန်းကလဲ မြန်မာ fonts အကြောင်းကို google မှာရှာရင်းနဲဲ့ MZ ကိုတွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ member မ၀င်ခဲ့ပါဘူး။ ခုတော့ ကျနော် MZ မှာ ရောက်နေကြောင်းပါခင်ဗျား။
ကျနော်ကတော့ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတခုဖတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ဆိုဒ်ထဲမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိုရမ်ဆိုပြီး mzကို ပြထားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့ မန်ဘာဖြစ်လာတာပါ။:)
:5::5::5:ကိုယ််ကတော့ Seminar တစ်ခုမှာကြားလိုက်လို့သုံးဖြစ်တာ။
မသိတာတွေများလွန်းပြီး စပ်စုချင်တာတွေကလည်း များတော့ MZ ဖိုရမ်က အသုံး၀င်တယ်လေ။
ဖြေပေးတဲ့သူတွေလည်း တက်တက်ကြွကြွဖြေပေးကြလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပြိး ဆက်သုံးဖြစ်တာ။
သူများအလှည့်ကျရင်တော့ ဆရာကြီးတွေကဖြေသွားပြိးသွား ဖြစ်လို့သိပ်မဖြေဖြစ်ပေမယ့် လိုက်တော့ဖတ်ဖြစ်တာချည်းပါပဲ။:101::101::101:
ကိုယ်တိုင်ကတော့ မအားတာနဲ့ စာရိုက်ရမှာပျင်းလွန်းတာရောသွားလို့ ဘလော့ဂ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး။
ဒါကြောင့် လာလည်ဖို့ မဖိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့ ဘလောဂ်ခြေမဲ့လေးပါ။
ဒါကြောင့် MZ မှာပဲ စတည်းချ မေးမြန်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ MZ ကို စသိတာ ကိုမိုးတိမ်ဆီကပါ ... အဲဒီအချိန်တုန်းက နည်းပညာသီးသန့်ဖိုရမ်လေးတစ်ခု လုပ်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ Mysteryzillion ကို သွားတွေ့တော့ ငါလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး ဒီမှာပဲ ဝင်ကူတော့မယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းတူတယ်ဆိုပြီး ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဝင်တော့ အားလုံးပေါင်းဆွေးနွေးတဲ့သူ ငါးယောက်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေအစပြုပြီး MZ အကျိုးကို အမြဲတမ်းသယ်ပိုးခဲ့ပါကြောင်း ခင်ဗျ။ ကိုစေတန်နဲ့ သိသွားတာလည်း ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ကိုစေတန်နဲ့ သိတာ MZ နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာတော့ သူ့သာ မေးကြည့်တော့ဗျာ ...
Alexander က Internet Journal ဖတ်ရင်း ... အဲမှာ MysteryZillion အကြောင်းပါလို့ စိတ်၀င်စားလို့လာကြည့်တာ ... ဒီလိုနဲ့ ဒီမှာပျော်သွားတာ ..... :6:
မော်ကျွန်းမှာရောက်နေတာဆိုတော့လဲ ... ... ... ကျနော့်မှာ တစ်ခုခုဆို ဒီမှာပဲလာရှုပ်ရတော့တာပေါ့နော် ... :5:
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် MZ fri တွေဆီလာလည်မယ် ... ဟဲဟဲ ...... \_:D/
ကျွန်တော်ကတော့ proxy number တွေသုံးနေရတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာ ... connection ကလဲလုံး၀သုံးစားမရတာနဲ့ google ထဲမှာ myanmar proxy numbers ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တာ ကိုညမီးအိမ်တင်ထားတဲ့ bagan proxy နံပါတ်တွေ (ကျွန်တော်စိတ်ထင် ၃၂ ခုလားမသိဘူး) ကို highlight လုပ်ပေးတာနဲ့ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တာပါ.. ၂ လလောက်ကြာမှ register လုပ်ဖြစ်တယ်.. ကျွန်တော်က register လုပ်ရမှာအရမ်းပျင်းတယ်လေ ..
ကျွန်တော်က planet ကမှာ forum စရေးနေတုန်း ကိုစေတန်က လာခဲ့ပါဦး အစပဲ ဆိုလို့ ဝင်ကြည့်လိုက်တာ.. ဘာမှ မရှိသေးဘူး.. အဲ့လိုကနေ စသွားတာပါပဲ
စေတန်ဘလောဂ့် ကနေတဆင့် သိရာက စသုံးကြည့်ဖြစ်တယ်။ စစချင်းတုန်းက mmglite သုံးဖြစ်တယ်။ member ဝင်လိုက်တာကတော့ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။
ကျွန်တော် MZ ကိုစသိတာက Service+ မှာ Blog သင်တန်းသွားတက်ရင်းနဲ့ ဟိုကဆရာပြောပြလို့စသိတာ..... စဝင်တုန်းကတော့ Ellriclau နာမည်နဲ့စဝင်တာ......စစဝင်တုန်းကMZမှာဘာမှမရှိသေးဘူး (မစုံသေးဘူးဆိုပိုမှန်မယ်ထင်တယ်:D) ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းဆက်မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး ...... ဒါနဲ့ပိုစ်မတင်ဖြစ်လို့လား activate မလုပ်လို့လားတော့မသိဘူး member နာမည်မှာ ကိုယ့်နာမည်မရှိတော့ဘူး:O နောက်တော့ ကိုexiter နဲ့Gtalk မှာတွေ့ရင်း Vista မှာမြန်မာ font ဘယ်လိုသွင်းရမလဲ ဆိုတာမေးရာက "သူလည်းမသိဘူးတဲ့ MZ မှာမေးပေးရမလားတဲ့" ကျွန်တော်လည်း MZ ကိုအဲ့ဒီတုန်းက အထင်မကြီးသေးဘူးဗျာ့ ကို့ရဲ့မေးခွန်းကို သူတို့ကအရေးတယူ ဖြေပေးကြပါ့မလားပေါ့...... ဒါနဲ့မေးပြီး ကိုexiterကြီးနဲ့ Gtalk မှာလေပြန်ကန်နေရင် MZ ကိုနောက်တခေါက်ဝင်အကြည့်မှာ????????
ဟာ:Oကို့ရဲ့မေးခွန်းက အချိန် 10minutes အတွင်းဖြေတောင်ဖြေပြီးနေပါလား (ဒီလိုမြန်တာ:67:)...... ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် MZ ကို နောက်တခေါက်ပြန်ရောက်လာတာပါ (အဲ့ဒီကစပြီး MZ မှာနောက်ထပ် ဘုံမပျောက်အောင်လို့ ပိုစ်များများရေးနေရကြောင်းပါ:D)
(ရေးတာနဲ့ဒီပိုစ်နဲ့ ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိဘူး MZ ရဲ့ကောင်းကြောင်း ပြောချင်လွန်းလို့ ဒီလောက်စာရှည်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်:D)
ကျွန်တော်ကတော့ mz ကို စသိတာ ကိုမိုးတိမ်ဆီကပါ ... အဲဒီအချိန်တုန်းက နည်းပညာသီးသန့်ဖိုရမ်လေးတစ်ခု လုပ်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ mysteryzillion ကို သွားတွေ့တော့ ငါလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး ဒီမှာပဲ ဝင်ကူတော့မယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းတူတယ်ဆိုပြီး ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဝင်တော့ အားလုံးပေါင်းဆွေးနွေးတဲ့သူ ငါးယောက်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေအစပြုပြီး mz အကျိုးကို အမြဲတမ်းသယ်ပိုးခဲ့ပါကြောင်း ခင်ဗျ။ ကိုစေတန်နဲ့ သိသွားတာလည်း ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ကိုစေတန်နဲ့ သိတာ mz နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာတော့ သူ့သာ မေးကြည့်တော့ဗျာ ... :d
ဟီး ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်နော်....
ဟီး ကျွန်တော် MZ ကိုစတွေ့တာက glite ကနေစသိတာပါ။ တွေ့တွေ့ချင်းတုန်းက ၀င်တာ၀င်ထားတာ မသုံးဖြစ်သေးပါဘူး ။အလုပ်စလုပ်ဖြစ်မှ စပြီးသုံးဖြစ်သွားတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ကအင်တာနက်ကို ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရလို့လေ။
ကိုစေတန်တို့ exiter တို့ရေ..
ကမ္ဘာမကြေ.. မြန်မာပြည်.. Г—Г—Г—Г—Г—
တစ်ရက် ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ စာရေးဆရာ ရွှေနွယ် ရဲ့ Blog အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ခု ဖတ်မိတယ်.......... သူက Simple Blog ကို ကိုစေတန်ရဲ့ Blog Home page နဲ့ ပြထားတယ်လေ......... ၀ါးတားတားနဲ့ မပီပြင်တဲ့ကြား ထဲကနေ www.saturngod.blogspot.com ကို ရောက်တယ်...........အဲ့ဒီကနေတဆင့် MZ ထဲကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်............ :67:
မနှစ်က စက်တင်ဘာပြီးတော့ဘလော့တွေခေတ်စားလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ မြန်မာဘလော့တွေ ဖတ်ချင်လာတယ်။ ဘလော့လိပ်စာတွေသွားတော့ ဖောင့်မရှိတော့ မမြင်ရဘူး။ အားလုံးမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် လိုတယ်ရေးထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ဂူဂယ်လုပ်ကြည့်တော့ စေတန်ဘလော့ စပေါ့ကို တွေ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့ဘလော့ စဝင်တဲ့ နေ့က သူရေးထားတဲ့ ပိုစ့်အသစ်က စိတ်ဓါတ်အချဉ်ဖောက်တယ်ဆိုလား။ အဲဒါနဲ့ သူ့ဘလော့ပိုစ့်တွေဖတ်ကြည့်တော အမ်ဇက်ဆိုတာတွေ့လို့ရောက်လာတာ။ အရင် အမ်ဇက်အဟောင်းကတည်း ကမန်ဘာဝင်ထားတာ။ ယူဇာနာမည်နောက်တစ်ခုနဲ့ပါ။ အဲဒီယူဇာ password မေ့သွားတာနဲ့ မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး။ နောက်ပိုင်း အမ်ဇက်အသစ်မှာ ဒီယူဇာနိမ်းအသစ်နဲ့ ပြန်လာတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဒင် ပြန်လာလေပြီ။ :D:D
ကျွန်တော်က အရင်က ဘလော့ဂ်ရေးတယ်လေ...ဘလော့တွေကိုလည်း လျှောက်လည်တယ်...:5:
ကိုစေတန်ရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေ့တိုင်းမသွားမဖြစ်ပေါ့...အဲဒါနဲ့ပဲစသိတယ်ပေါ့ 2007 Aug မှာ shinehtetshein ဆိုတဲ့ နာမည်
နဲ့ member ၀င်တယ်...မှတ်မှတ်ရရ အဲတုန်းက MZ က member 150 လောက်ပဲရှိသေးတယ်...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘလော့လဲမရေးဖြစ်တော့ဘဲ...MZ လဲမ၀င်ဖြစ်တော့တာ...နောက်ဆုံးpassword မေ့တဲ့အထိပါပဲ:2:..အဲဒါနဲ့အခုname နဲ့ 2008 Jan
မှာထပ် register လုပ်တယ်...နောက်ပိုင်းလည်း၀င်မဆွေးနွေးနိုင်ဘဲ ၀င်တော့ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်...:)
အခုတော့ internet ကိုအချိန်ပြည့်သုံးရတဲ့ဘ၀ကိုရောက်လာတော့နဲနဲပါးပါး၀င်ပြောဖြစ်လာတယ်ဗျာ..:P
ကျွန်တော် MZ ကို မြန်မာ size တွေကို ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ တွေ့သွားတာ။ member မ၀င်ဘဲနဲ့ ၀င်ဖတ်ဖြစ်နေတာ အတော်ကြာတယ်။ MZ မှ MZ ဖြစ်သွားရတာကတော့ ကို tweety ရဲ့ online security topic တွေကြောင့်ပါ။
အခုတော့ MZ မှာ အတော့်ကိုပျော်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်က planet forum မှာဘယ်သူလည်းသိတော့ဘူး ကိုစေတန်ရဲ့ blog စာအုပ်ကိုညွှန်းထားလို့ သူ့ blogspot ကိုသွားကြည့်ရာက forum ဆိုတဲ့ tab ကိုနှိပ်ကြည့်ပြီး
ကျနော်က မဂ္ဂဇင်း ထဲကနေMZကိုတွေ.တာခင်ဗျ
MZ Education ကိုလားမသိ၀ူးရေထားတာကျနော်လဲစိတ်၀င်စားသွားတယ်
online မှာကျောင်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ်ဒါပေမယ့်ကျနော်ကလည်းonlineသုံးရတဲ့အချိန်ကနည်းတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် MZ ကိုရောက်လာတာတော့ကံကောင်းတယ်ဗျနော်:5:
Myanmar IT Pro က သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြတာပါ။ စသိသိချင်း ကတည်းက နေ့တိုင်း နီးပါး ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ............. သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကိုလည်း ၀င်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်း ခဲ့ပါတယ်...... Mz ကြီးက နွယ်နီ့ ပိုက်ဆံတွေကို အများဆုံး ဖြုန်းပြစ်တဲ့ website တခုပေါ့ (အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်တိုင်း သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကုန်သွားလို့ ဟဲဟဲ) လေးစားလျှက် နွယ်နီစိုး
mz ကိုစသည်တာက အနော် သူငယ် ချင်း ကို blue jean ကစပြောတာပါ ။ ၀င်ရေးဖြစ်တာတော့ သိပ် မကြာသေးပါဘူး။:D
googling လုပ်ရာက ဆိုပါတော့..
Myanmar Forum ဆိုပီးရှာလိုက်တာ.. လင့်ခ် တွေနှိပ်ရင်းနှိပ်ရင်း.. ရောက်လာတာပဲ..
အရင်က စာလုံးပေါင်းရတော်တော်ခက်လို့ ၀င်ဖြစ်ဘူး..:D ကြုံရာကဖေး ၀င်သုံးတုံးကပေါ့..
အခုတော့ ကိုယ့်စက်မှာကိုယ်သုံးဖြစ်တော့.. bookmark လုပ်ထားလိုက်တယ်.. ဖိုရမ်ဆိုတာကြီးကို အရင်ကတည်းက (bagan net forum) ကတည်းက ကြိုက်တာဆိုပါတော့.. အဲဒီ တုန်းကတော့ squall_x ဆိုတဲ့ နစ်ခ် နဲ့ ၀င်ပေါခဲ့တယ်ဆိုပါတော့.
ကျနော်လဲ ဒီလို Thread မျိုးဖွင့်မလို့ပဲဗျ
ကျနော်ကတော့ ဒီလို ဒီလို
ကျနော် အဲဒီနေ့က ကျနော်အဖေနဲ့ လသာ သွားတယ်။ ကျနော်ကတော့ COM မှာ အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုပီးတော့ သွားတာပေါ့ဗျာ။ COM ကလဲ Connection ကျနေလို့လူမရှိဘူး။ ကျနော်က အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းဆိုင်ကိုတာ၀န်ယူနေရတဲ့အချိန်။ လက်ထဲမှာလဲ Cafezee ကမရှိ
ဒီတော့ အဲဒီမှာပဲ ကွန်မကောင်းတာကိုစိတ်ရှည်စွာဖြင့်စောင့်ပီး Google မှာ Cafezee patch ဆိုပီးရှာလိုက်တာ
ပီးတော့ကွန်မကောင်းလို့ အဲဒီLink လေးကိုတေးမှတ်လိုက်တယ်
နောက်ပိုင်း mysteryzillion.org ဆိုပီးမမှတ်မိတော့ google ကနေ ပဲ cafezee patch ဆိုပီးရှာ
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဆိုတဲ့ Zude ရောက်လာတာပါဗျာ
မနွယ်နီဟုတ်လို့လားဗျာ အစ်မကို always online တွေ့နေရတယ်:39:
MZ ကို စတွေ့ တာက တော့..blood windows virus ကို ဘယ်လိုသတ်မရမလဲ.
google မှာ လိုက်ရှာရင်း နဲ့ ..၀င်ဖြစ်သွားတာပါ..
အဲဒီတုန်းက..ရှာတုန်းက..blood windows ပဲ..
အဲဒီကတည်း က စ၀င်ဖြစ်တာပါ...
ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ ဒီလိုပါ။ အရင့်အရင်တုန်းက saturn ရဲ့ blog ကိုဖတ်တယ်။ နောက် အဲဒီကတဆင့် mz ကိုသိတယ်။ တခါတလေ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ member လုပ်ပြီး နေ့တိုင်း၀င်ဖြစ်တာတော့ မကြာသေးပါဘူး။
ဘာလိုရောက်လာလဲဆိုရင် အဲဒီက ဟာကိုပြန်ဖော်ပြမယ်နော်။
အဲသလိုလေးနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။ Thread ပိုင်ရှင်ကြီး ဂျစ်ဂျစ်လေးအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ :77:
internet ကို ဆိုင်တွေမှာသွားသုံးရတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်တွေပဲအဓိကရှာဖြစ်တာများတယ်။ အဲဒါနဲ့ virus ရှင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာရင်း MZedu ထဲ ရောက်သွားတယ်။ သိပ်မကြာခင် server down သွားတော့ google ထဲမှာရှာရင်း MZ forum ထဲ ရောက်တော့ ပြန်မထွက်နိုင်ဘဲ တစ်၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတာ။ online ချိတ်တာနဲ့ gmail ဖွင့် reader ဖတ် mz ၀င် ဖတ်စရာသိစရာတွေများတော့ မကုန်နိုင်သေးဘူး ကျနော် နယ်မှာဆိုတော့ ဒီလိုforum က အရမ်းအသုံး၀င်ပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :77:
ကျနော်ကတော့ ကိုဒီဘီအေကြီးကျေးဇူးနဲ့ရောက်လာတာ။ mmopenlibrary မှာစာအုပ်တွေ download ဆွဲရင်း MZ ကိုသိလာတာ။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ကိုဒီဘီအေကြီးကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ကြိုပွိုင့်ရိုက်ထားတာ။:D ကျနော်က ခင်တဲ့လူဆို နောက်တတ်တယ်။ ဒါကိုတချို့က အထင်လွဲကြသေးတယ်။ ကိုဒီဘီအေကြီးကတော့ ကျနော် နောက်တာတွေကိုနားလည်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က အစကဘယ်ဖိုရမ်မှမသွားတတ်သေးဘူး၊ (မြန်မာကျုပစ်ကလွဲလို့ပေါ့ - အဲဒီတုန်းက ဂန္ဒဝင်ရဲ့ ခပ်ပါးပါး အနုပညာလေးတွေ ခေတ်စားနေတုန်းပေါ့ .. ) နောက်တော့ ဘလော့လုပ်ကြည့်ချင်လာတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရှာမလွတ် မောင်စေတန်ရဲ့ ဘလော့ အဟောင်းလေးရောက်တယ်၊ အဲဒီကနေ MZ မရောက်ဘဲ ML (mmopenlibrary) ကိုရောက်သွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဗမာစာအုပ်တွေ (ဝတ္တုစာအုပ်တွေ) တော်တော်များများရှိနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အားကျသွားတယ်။ သို့ပေတဲ့ ကိုယ့်မှာက ဗမာစအုပ်ကို အီးဖောမက်မရှိဘူး၊ သူတို့ဆီမှာတင်ပေးကြသလို ကိုယ်လဲတင်ပေးချင်တယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ကိုယ့်ရှိတဲ့ နည်းပညာစာအုပ်တွေတင်ပေးမိတယ်။ နောက် သူရို့ (စေတန်၊ ဆြာပီ) က ကောင်းတယ်ဆက်တင်ဆိုလို့ အားရပါးရ ဆက်တင်ဖြစ်သွားတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ နိုဝင်ဘာမှစတာ။ ဘယ်လောက်ဇွဲကောင်းလဲဆို ခုခေတ်ဘလော့ပိုးထသလိုဘဲ နေ့ည မအိပ်ဘဲစာအုပ်တင်တယ်။ တစ်လ အတွင်း အုပ် ၁၀၀ ပြည့်သွားလို့ ဂုဏ်တွေဘာတွေ အပြုခံလိုက်ရသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက စီဘောက်မှာ လိုချင်စာအုပ်ရှိရင်တောင်းပါဆိုပြီး ရုံးချိန်အတွင်း ရှာတယ် တင်တယ်နဲ့ ဖိုရမ်မှာ စာအုပ်တောင်းကြသလို ဆားဗစ်ပေးတယ် ကျွန်တော်။
အဲဒီကမှ ML နဲ့ ညီအမတော်တဲ့ MZ ကိုသွားသွားချောင်းဖြစ်တယ်။ သူကပိုပြီး အလှစုံတယ်လေ။ ဒါတောင် နှစ်လလောက် မင်ဘာ မလုပ်သေးဘူး။ နဲနဲမူနေသေးတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်လဲ ဝင်ရေးချင်လာတာနဲ့ မင်ဘာဝင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို ကျွန်တော့် အကောင့်နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ ဒီမှာ။ တစ်ခုက ကျွန်တော့် နာမည်နဲ့ ရေးလို့ မသင့်တော်တာလေးတွေ ရေးလို့ရအောင်ပေါ့။ (ကလောင်ခွဲထားတယ်ခေါ်မလား) သဘောကတော့ တစ်ချို့ အမေး အဖြေတွေကို အက်ဒမင်နေရာကနေ မေးတယ် ဖြေတယ်လုပ်လို့ မသင့်တော်ဘူးထင်တာကို အဲဒီ အကောင့်ကနေ ရေးဖြေပါတယ်။ (ခုမှဖွင့်ချလိုက်တာ .. ဟိဟိ)
တော်တော်များသွားပလားမသိဘူး။ တော်ဦးမှပါ။ ဒီလောက်ပါဘဲ။ :P
ကိုကြီး mrDBA ရဲ့ မချော နှစ်ယောက်ကို တယောက် ဇာက်လမ်း ပေါ့ ။ မင်မင်ဆိုတာ တချိန်က မန်ဘာပါပဲ ဆိုတဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ပဲ :P။ ပြောရင်ဆိုရင်း ML တောင်လွမ်းလာပြီ (
ကျွန်တော်ရဲ ့အချစ်တော်ကြီး Google မှာ ဇော်ဂျီ Font နဲ ့မြန်မာလိုရိုက်ရှာလို ့ရတယ်လို့သူငယ်ချင်းကလှမ်းပြောလိုက်တာနဲ့စပြီး Google မှာလက်တဲ့စမ်းရင်းနဲ ့... မထင်မှတ်ဘဲ Mystery Zillion ဆိုတဲ့ ရွှေထုပ်ကို သွားဖြည်မိလိုက်တာ အခု ဖိုရမ်ရဲ ့အနှစ်သာရကိုသိသွားတယ်။ ကိုComputerCrazy ကြီးရဲ ့ကျေးဇူးကြောင့် Html ကိုစသုံးတတ်လာပြီး nnyioo.googlepages.com ဆိုတဲ ့Blog ကိုစတင်ရေးသားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လဲ ကိုComputerCrazy ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ :77::77::77:IT နဲ ့ပတ်သက်ပြီး မျက်နှာမငယ်ရတော့ဘူး.. တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်... Google ကိုရော.. Mystery Zillion ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် အကိုအမတွေကိုရော... MZ ချစ်တဲ ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရော..:77::77::77:
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီပေါ့... ဟိဟိ... ကိုပီဇီနဲ့သိလိုက်တော့ အရည်အချင်းတွေတော့ တိုးတက်သွားတာအမှန်ပဲ.. ဘာအရည်အချင်းလဲဆိုတာတော့ မမေးနဲ့..
ဆိုကောင်းပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့နေ့လေးပါ ခွန်ရေ.... အဲလိုမပျော်ရတာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ...
ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို ကျွန်တော့် အကောင့်နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ ဒီမှာ။ တစ်ခုက ကျွန်တော့် နာမည်နဲ့ ရေးလို့ မသင့်တော်တာလေးတွေ ရေးလို့ရအောင်ပေါ့။ (ကလောင်ခွဲထားတယ်ခေါ်မလား) သဘောကတော့ တစ်ချို့ အမေး အဖြေတွေကို အက်ဒမင်နေရာကနေ မေးတယ် ဖြေတယ်လုပ်လို့ မသင့်တော်ဘူးထင်တာကို အဲဒီ အကောင့်ကနေ ရေးဖြေပါတယ်။ (ခုမှဖွင့်ချလိုက်တာ .. ဟိဟိ)
တော်တော်များသွားပလားမသိဘူး။ တော်ဦးမှပါ။ ဒီလောက်ပါဘဲ။
ဟား ဟား ခင်ဗျား ပေါ်ပြီပေါ့လေ။ :71::71::71:
မပေါ်သေးပါဘူး၊ ဖွင့်ပြောပြလိုက်တာ။ :d
ကျွန်တော် အမ်ဇက်ကို်ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတော့ ဟို Chrome.exe ဆိုတဲ့ အကောင်ကြောင့်ပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အမ်ဇက်မှာ ရှိတယ်တဲ့။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့။ အမ်ဇက်ကို နားစွန်နားဖျားလေးတော့ ကြားဖူးနေတာကြာပြီ။ အဲဒီအကောင်စတော့မှ သူငယ်ချင်းတွေကို အမ်ဇက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ် ဖတ်ကြည့်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က တော့ မမ်ဘာမ၀င်ဖြစ်သေးဘူး။ နောက်တစ်ရက်ကျတော့မှ လာကြည့်ရင်းနဲ့ တခါတည်းမထနိုင် ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ အရင်တုန်းက ချက်တင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော် မောင်ပြုံးက (အခုလည်းဖြုန်းနေတုန်း:D ထို်င်နေတုန်းပါပဲ ) အမ်ဇက်ထဲမှာ ကျင်လည်ကျက်စားနေကြောင်....။ စားကျက်လုတယ်လို့တော့ မထင်နဲ့နော်။
blog မှာ မြန်မာစာပေါ်အောင်မလုပ်တတ်လို့ရောက်လာတာ စေတန်ရေးတဲ့ Blog စာအုပ်ကို ဟိုကလည်းညွှန်း၊ ဒီကလည်းညွှန်း ဆိုတော့ စေတန်ဆိုတာဘာကြီးလဲသိချင်လို့ MZ မှာ member ၀င်ဖြစ်သွားတာ ဒီရောက်တော့ သိချင်တာတွေ တော်တော်များများ သိရတာနဲ့ မပြန်ဖြစ်တော့တာ။
ကျွန်တော် ကတော့ ဗျာ ဒီ MZ ဖိုရမ်ကြီး ကို အိပ်ရာပေါ်မှာ စတွေ့တယ်ပြောရမယ်ဗျ။ Doburma ဆိုက်ကို ကျွန်တော် တည်တောင်ပြီး များမကြာမီ ကျွန်သူငယ်ချင်းစေတန့် အကို ကြည်သာ(ပွဲမကြိုက်ခင်) အိမ်မှာ ပက်လက်ကလေး သွားတွေ့တယ်။ အဲ့ မှာပဲ Domain စျေးပေါပေါနဲ့ ရမယ် ဆိုက်လုပ်မလားဆိုပြီးမေးမိလိုက်တော့။ ကြောင်တောင်တောင် Domain တစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်ရမယ်ဗျာ။ အဲ့မှာပဲ MZ ကို စပြီး သိခဲ့သဗျာ။
planet.com.mm မှာ linux အကြောင်းတွေ မေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဖြေသွားကြတာ။ တနေရာမှာ ကိုစေတန်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ကမေးတယ်။ ကိုစေတန်ဟာ သူ့ဆရာများလားလို့။ အဲဒီမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်၊ နောက် mz ဆိုတာလုပ်နေတယ်ဆိုတာရယ် တွေ့လိုက်တာပဲ။ အဲဒီကနေ စလိုက်တာ အခုဆိုရင် တခြား forum တွေတောင် မ၀င်ဖြစ်တော့ဘူး။ ပညာတွေတော်တော် ရလိုက်တယ်။ မသိရင် မေးလိုက်တာဆိုတော့လေ။ နောက်ပြီး အဲဒီမှာ မေးပြီးသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဆရာလုပ်နေရတယ်။ အဲဒီအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သင်တန်းတွေကြောင့် သိပ်မလာဖြစ်တာ အတော်နာတယ်။ တစ်ခါရောက်လာရင် ဖတ်စရာတွေက တစ်ပုံကြီးပဲ။ (ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး) အော် အဲဒီလိုနဲ့ mz ကိုရောက်ခဲ့တာပါ။
အစက Wordpress အတွက် ဘလော့ Add-on တွေ၊ Help တွေ လိုက်ရှာရင်း၊ MZ Edu ကို အရင်ရောက်တယ်။ အဲဒီမှာ AutoCAD ပါ ဆက်တက်ဖြစ်ရော။ နောက်ပိုင်း Online သင်ခန်းစာတွေ လိုက်လုပ်၇င်းနဲ့ ကို စေတန်ကြီး သင်တန်းခန်းကိုရောက်၊ အဲဒါပြီးမှ MZ Forum ကို ရောက်လာတာပါခင်ဗျာ။ Forum ဆိုတာ ဘာမှန်းသိပ်မသိသေးပဲ ရောက်လာပေမယ့် အလွန်သဘောကျပြီး မကြာမကြာ ရောက်ဖြစ်ပါကြောင်း။ :6:
အခုမှ ဒီ်ဖိုရမ်ိကိုတွေ့လို့ အခုပဲရေးလိုက်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ အမ်ဇက်သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ဒီ ကိုေ၇ာက်လာတာပါ။
ကွန်ပျုတာ၊ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမှ မသိတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ internet journal ကနေသိရတာ။
ကျွန်တော်စသုံးတော့ forum တွေဖတ်ရင်းသဘောကြလာလိုခုတိ mz မှ mz ဖြစ်နေတာ:))
ကျွန်တော ့် ကတော့ဇော်မော်ကွန်း နဲ့ခင်ပြီးမှ
mz ကို ရောက်လာတာပါ.. ဖို၇မ် တော်တော်များများမှ
လိုက်ဖတ်ရုံလေးပါဘဲ.. ဟီးဟီးး ဘာမှ မတတ်တာ
Once I gotaproblem in making blog, at that time,aboy who is not MZ member told me about MZ so that I came MZ and joined.
In later, MZ becomes my knowledge bank as well as my home. :103:
ကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းကဆရာမတစ်ဦးရဲ ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုစေတန်ရဲ ဘလော့ထဲကကျောင်းအကြောင်းသတင်းလေးတွေဖတ်ပြီး mz ကိုရောက်လာတာပါ